အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ရေခဲတောင်ပေါ်က ထူးဆန်းသော ပိုးကောင်တစ်ဖြစ်လဲ အပင်ငယ်ကလေးများ
33 Responses to “ရေခဲတောင်ပေါ်က ထူးဆန်းသော ပိုးကောင်တစ်ဖြစ်လဲ အပင်ငယ်ကလေးများ”
ချောရေ။... တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်.. ပိုးကောင်တွေကအနေအပင်လေးဖြစ်လာတာ အံ့သြဖို့လဲကောင်းတယ်.. ရှာရှာဖွေဖွေလေး စုစောင်းရေးထားပေးလို့ကျေးဇူးဘဲ....ပုံတွေကြည့်ရတာ တော့အသည်းယားစရာ...
အကောင်မှန်းသိတော့ စွပ်ပြုပ်တော့စားရဲမယ်မထင်ဘူး..း)))
ဆောင်းမှာပိုးကောင် နွေမှာသစ်ပင် အဖြစ် ထူးထူးဆန်းဆန်း တန်ဘိုးကြီးလှတဲ့ ပိုးနွယ်ရှင်ခေါ် ရှီးပဒီးအကြောင်း ဗဟုသုတ ရသွားတယ် ချောရေ။ ဆေးအာနိသင်စုံလင်တဲ့ ရှီးပဒီကို ချောပြောသလို စနစ်တကျ မွေးမြူစိုက်ပျိုးပြီး ဈေးကွက်တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးနိုင်ရင် အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့နော်။
ဗယုသုတတွေရရှိပါတယ် ကျေးဇူးပါပဲ မချောရေ၊
မျိုးရိုးဗီဇနည်းတွေသုံးပြီး မွေးမြူရေးလုပ်ပြီး ထုတ်လိုက်ရရင်တော့ ကောင်းမှာပါ၊
သိချင် နေတာကြာပြီ။ ဖုန်ကန် တက်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေက ယူလာတယ် သိမ်းထားတယ် ပြောတယ်။ အခုအထိတော့မရသေးဘူး။ နောက်တစ်ခေါက် ရန်ကုန်ပြန်မှ ရမယ်ထင်တယ်။ ဘာကောင်းတယ် ညာကောင်းတယ် ဆိုလား။ အသေးစိပ် ရှာဖွေတင်ပြပေး တဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါ အစ်မချော။
ပုံတွေမြင်တော့ အူထဲအသည်းထဲ တယားယားနဲ့..
ထူးဆန်းရှားပါးတဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေက အံ့သြစရာနော်...
အရင်ကတစ်ခါမှ မကြားဖူးဘူး။ အခုမှ သိရတာ..။
အဲလိုပိုးကောင်လေးဆို သိပ်အသဲယားတာ..တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့ ပို့်စ်လေးတစ်ခုပါပဲ ချောရေ...။
ထူးဆန်းလှချည်လားနော်။ ပုံကြည့်ရတာတော့ ရင်ဘတ်ထဲမှာ ယားကျိယားကျိ ဖြစ်မိတယ်။
စိတ်ဝင်စားဘို့ ကောင်းတဲ့ အတွက် ရှယ်ခွင့်ပြုပါ။
ထူးဆန်းလိုက်တာနော် .. သူတို့ဘ၀ကျ သူများတကာ သတ်စရာမလိုပဲ အလိုအလျောက် သေဆုံးပြီး လူတွေကို အကျိုးပြုသေးတယ် .. အသက်ရှင်နေတဲ့ ပိုးကောင်ပုံလေးတောင် မြင်ဘူးချင်တယ် .. :D
အသဲယားစရာနော် မရေ စားကြည့်ချင်တယ်
အမရဲ့ ဒီပို့စ်ကို ကျွန်တော် https://www.facebook.com/wonderful.case မှာ တင်ထားပါတယ်..
ဒီအကောင်လေးတွေက အပင်ဘဝ ပြောင်းပြီးတာနဲ့ အကောင်ပြန်မဖြစ် တော့ဘူး ထင်တယ်နော် မချော၊ ဒါဆိုရင် သူတို့သက်တမ်းက တစ်ဆောင်းပဲခံပြီး နွေမှာ အပင်အဖြစ်နဲ့ သေသွားတဲ့ သဘောပဲလား? ဒါမှမဟုတ် အကောင်ငယ်တုန်းက အပင်မဖြစ်ဘဲ ကြီးလာလို့ ‘အို’ သွားမှ ဆောင်းမှာ မလှုပ်မရှားနိုင် ဖြစ်ပြီး အပင်ဖြစ်သွား တာလား?
သူတို့ရဲ့ ဇီဝနာမည်၊ အင်္ဂလိပ်နာမည်၊ ဒါမှမဟုတ် တရုတ်နာမည်ကို သိရရင် ကောင်းမယ်၊ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ ဒီပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ မချောရေ...။
ဒီအကောင်အပင် လေး တွေ အကြောင်းတခါ မှ မကြားဖူးဘူး စိတ်ဝင်စားတယ် တကောင်တသောင်းခွဲ ဆိုတော့ အကောင်တရာလောက်တော့ ဝယ်စားအုန်းမှ ဟဲ..ဟဲ
မချောပြောမှပဲ ရှီပဒီလို့ ခေါ်မှန်းသိတော့တယ်ဗျာ.... ဒီမှာတော့ ကောင်းတယ် သောက်သောက်ဆိုလို့ ၀ယ်ပြီးတော့ တစ်တောင့်ကို ရေနွေးနဲ့စိမ်သောက်၊ ၁၀ ခါလောက် စိမ်ပြီးရင် ၀ါးစားနဲ့..... လူတော့ တော်တော် လန်းဆန်းတယ်ဗျ......
ဒီဟောင်ကောင်က တရုတ်ဆေးဆိုင်တွေမှာရောင်းနေကြတာ တွေ့တယ်.
ထင်တော့ ထင်သား ပိုးကောင်နဲ့ တူတယ်လို့ တော့
ခုလို မချော က ပို့(စ်)လေးတင်လိုက်တော့ မှပဲ
ရှီးပဒီးကို နာမည်ကြားဖူးတယ်။ ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာလားပဲ။ ဟိုးတုန်းက ဘာမှန်းသေချာမသိဘူး။ ရှီးပဒီး ရှီးပဒီးနဲ့ အလကားနေရင်း နှုတ်ထဲစွဲသွားပြီး အော်ခဲ့တာ သတိရမိတယ်။ နွယ်ပင်လေးစပေါက်လာတဲ့ပုံလေးမှာ အသည်းယားဖို့ကောင်းလိုက်တာ၊ မြွေဟောက်ပါးပြင်းလေးထောင်နေသလိုလေး။ သနားပါတယ်နော်။ သူ့ခေါင်းမှာနွယ်ပင်က ကပ်ပေါက်လာတာပေါ့။
မသိသေးတာ သိလိုက်ရလို့ ကျေးဇူး အကြီးကြီး တင်သွာပါတယ်။ လေးရင် ဖယ်လိုက်နော်။
အဲဒါလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားအံ့သြလွန်းလို့ ဓါတ်ပုံတွေ ရုိုက်ဟုိုမေးဒီမေးနဲ့ ပေါ့။ တိဗက်တွေလာလာရောင်းတာလေ။ ကုိုယ့်မှာအနုကြည့်မှန်ဘီလူးလေးလည်းပါတော့သေချာ ကြည့်တာပေါ့။ ကိုယ်ကသိပံ္ဗသမားဆုိုတော့အပင်ကနေအကောင်ဖြစ် တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ယုံနုိုင်မှာတုန်း။ ဒါပေမဲ့လည်းမှန်ဘီလူးအောက်မှာမျက်စိလေးတွေပါးစပ်လေးတွေနဲ့ တထပ်တည်းတူတာတွေ့ ရပြန်တော့မယုံနုိုင်စရာတွေးရခက်ခဲ့တာ ယူအက်စ်ရောက်တဲ့ထိဘဲ။ မျက်စိလေးတွေကအင်းဆက်မျက်စိဆုိုတော့မဲပြီးလက်နေတယ်လေ။ တစ်နေ့ တော့ကိုယ်နဲ့ ကုိုယ့်ပရောဖက်ဆာကုိုယ့်စာတမ်းကိုဆွေးနွေးနေတုန်းသူ့ သူငယ်ချင်း မှုိုတွေဘဲလေ့လာတဲ့ ပါရဂူတစ်ယောက်ကအီးမေးလ်နဲ့ ဓါတ်ပုံတွေပို့ လာတယ်။ ကုိုယ့်ပရောဖက်ဆာကသဘောတွေကျပြီးကုိုယ့်ကုိုပြတော့မှကိုယ်သိချင်နေခဲ့တဲ့ အဲဒီ ရှိပဒီးလိုအကောင်နဲ့ သူတုို့ ခေါင်းကနေ fungusတွေထွက်နေတာပါလားဆိုတာသိခဲ့ရတော့အံ့
စိတ်ဝင်စားရင် သူ့ ကိုတူးတဲ့ဗီဒီယိုလင့်လေးအောက်မှာ။
ရှည်သွားလို့ တောင်းပန်ပါတယ်နော်။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာလေးမို့ လို့ ကျေးဇူးလည်းတင်ရင်းမျှဝေတာပါ။
ကချင်ပြည်နယ်ရောက်ခဲ့တုန်းက သိတ်ငယ်သေးလို့လားမသိဘူး.. မဂျစ်ဥလောက်ပဲသိခဲ့တာ.. ခုမှ ရှီးပဒီးကိုသိခွင့်ရတာ.. ချောကို ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးပါဘူး...
မချောရေ...အဲဒီ ရှီးပဒီးအကြောင်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးနှစ်တုန်းက သူရဇ္ဇမဂ္ဂဇင်းလား၊ နက္ခတ္တရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်းထဲမှာလား မသိဘူး ဖတ်မိဖူးတယ်။ သူကတော့ ၀တ္ထုပုံစံမျိုး ရေးထား တာပေါ့။ မချောရေးထားသလိုပဲ ဆေးဖက်ဝင်ပြီး ရှားပါးတဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အပြင် တန်ဖိုးကြီးတာမို့ အလွယ်တကူ တွေ့ဖို့ ခဲယဉ်းတယ်တဲ့။ အဲဒီ ဆောင်းပါးရှင်က ကမ္ဘာကျော်တဲ့ မြန်မာ့ဂျင်စင်း ဆိုပြီးတောင် တင်စားပြီး ရေးထားသေးတာ မှတ်မိနေသေးတယ်။ အခု နောက်တစ်ခါ မချောရေး ထားတာ ဖတ်လိုက်မှ ရှီးပဒီးအကြောင်း ပိုပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိသွားရတယ်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ မချောရေ။
ထူးဆန်းတယ် ဆေးဖက်ဝင်နိုင်တယ် ထူးဆန်းရှားပါးတဲ့ အပင်လည်းဖြစ် အကောင်လည်းဖြစ် ဆေးကလည်းကြီးတယ်နော်
ကွန်လေးကောင်းတုန်း မောင်ဘကြိုင်လည်းကံကောင်းတုန်း အပြေးလွှားမန့်ခဲ့တယ်ဗျို့း)
ီဒီရှီးပဒီးကောင်ကိုရေခဲတောင်က ပြန်လာတဲ့ သူတွေဆီကတော့တွေ့ဖူးတယ်...အခုမှ ရှီးပဒီးအကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
MM Free said...
ပူတာအိုမှာတွေ့လို့ဝယ်ခဲ့တယ် ခုမှသိရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှယ်ခွင့်ပြုပါ။
hkawng naw said...
Caterpillar Fungus or Cordyceps Sinensis ( Dong Chong Cao )
မဟေသီမဂ္ဂဇင်းမှာ ခါကာဘိုရာဇီခရီးသည် အခန်းဆက် ဆောင်းပါးမှာ ဖတ်လိုက်ရကတည်းက စိတ်ဝင်းစားတာ..ခုမှပဲ သေချာသိရတော့တယ်..ကျေးဇူးဗျား..
ခုလိုစနစ်တကျရှင်းပြထားတဲ့ မချော ကိုကျေူးးဇူးတင်ပါတယ် ရေခဲတောင်ပေါ်သွားချင်တယ်ရောက်ခဲ့ရင်
Thanks Ma chaw for your info. I found this one at Chinese medicine shop in Singapore. Very expensive and small pack (about5kyat thar) is nearly S$ 3000.Where can we buy in myanmar?
မင်္ဂလာပါ. ဒီပို့စ်လေးကို သဘောကျလို့ Myanmar Blogs Digest Page လေးမှာ ဝေမျှဖို့ ယူသွားတယ်နော်.
အခုလိုမျိုး ပို့စ်ကောင်းကောင်းလေးတွေကို ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေဗျာ...